Madaxweyne Farmaajo ma u hoggaansami doonaa cadaadiska Sucuudiga Saaray Dalka Qater? | Cadceed newssite
Madaxweyne Farmaajo ma u hoggaansami doonaa cadaadiska Sucuudiga Saaray Dalka Qater?
Waxaa banaanka u soo baxaya warar sheegaya in Boqortooyada Sucuudi Caraabiya ay cadaadis ku hayso Dowladda Soomaaliya sidii ay qayb uga noqon lahayd xasaradda ka dhex taagan dalalka Khaliijka Carabta ee xiriirka u jarey dalka Qatar isla markaana cunno-qabateyn ku soo rogey.
Sucuudiga ayaa war saxaafadeedkii u horeeyey ee arrintan ku shaciyey ka dalbadey dalalka walaalaha la ah sida ay hadalka u dhigeen in ay qaadaan talaabada ay qaadeen oo kale, waxaana arrintaas fuliyey dalal dhawr ah oo ku yaala qaaradda Afrika, sida Senegal, Maroco iyo Jabuuti.
Dowladda Soomaaliya ayaa go’aan dhex-dhexaad ah ka qaadatey khilaafka waxaana ay ku baaqdey in wada hadal lagu xaliyo loona maro ururka Jaamacadda Carabta iyo Ururka dalalka Islaamka.
Wefdiga Soomaaliya ee Sucuudiga
Sucuudiga waxaa booqasho ku jooga wefdi aad u culus oo u badan Wasiiro Dowladda Federaalka, booqashada ayaa ahayd mid sii qorsheysneyd kana dhalatey booqashadii Madaxweyne Farmaajo ku tegey Sucuudiga.
Golaha Wasiirada ee tirada badan ee ku sugan Sucuudiga ayaa qorshuhu ahaa in ay la kulmaan dhigooda dalka Boqortooyada Sucuudiga oo kala saxiixdaan heshiisyo iskaashi ah oo lagu hormarinaayo Soomaaliya.